प्रधानमन्त्रीलाई रमेश खरेलको खुलापत्र – Koshidaily
access_alarms Koshi daily २२ चैत्र २०७६, शनिबार ०९:१७	chat_bubble_outline 0	Comments
रमेश खरेल, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले सामाजिक संजालमा एउटा नाङ्गो मानिसलाई प्रहरीले बजार घुमाएको तस्बिर भाइरल भइरहेको छ। शायद यो दृश्य तपाईं लेपनि हेर्नु भएको होला। सल्लाहकारहरूले यसबारेमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका हुन सक्छन्। यो तस्बिर एक तन्‍नेरी नेपालीको हो, जो स्वदेशको भोकमरी छल्न विदेशमा रोजगारीका लागि गएका थिए। तर कोरोना महाव्याधिका कारण बेरोजगार बन्‍न पुगेर उनले मातृभूमि फर्किने निधो गरे।
स्वदेश छिर्ने नाका सिल मात्र नभई सश्त्र सज्जित सुरक्षाकर्मीले उनी र उनीजस्ता स्वदेश छिर्न खोजिरहेकालाई देशको सरहद भन्दा बाहिरै रोक्छन्। ‘मरता क्या नहिं करता’ भने जसरी उनी मातृभूमिको न्यानो अँगालोमा पुग्‍न चिसो र तीव्र बहावको महाकाली नदीमा हाम फाल्छन्। महाकालीको बेगसँगै पौंठेजोरी खेल्दै नेपाली किनार भेट्छन्।
तर नदी पार गर्न सफल उनी दु:ख भने पार गर्न सक्दैनन्। ‘तावावाट भुङ्ग्रोमा’ भने जसरी उनी सीमा सुरक्षा निम्ति तैनाथ सुरक्षाकर्मीको फन्दामा पर्छन्, स्वेदश प्रवेश गरेको कसुरमा। निर्वस्त्र उनलाई कब्जामा लिइन्छ र बजार घुमाइन्छ। त्यसपछि उनले के भोगे, त्यो रामजाने।
बैचैनी र विचल्लीमा परेका हजारौं नेपाली तन्‍नेरीमध्येका उनी एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। जसको पसिनाको कमाइलाई यस मुलुकले ‘रेमिट्यान्स’ भन्दै कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा दर्ज गर्छ। तर, ती योगदानकर्ता स्वयम् जब विदेशी भूमिमा बिखलबन्दमा पर्छन्, तब स्वदेशको ढोका उनीहरूका लागि बन्द हुन्छ। हो, कोरोना संक्रामक रोग हो र यसै जो कोहीलाई निर्वाध प्रवेश दिन सकिन्‍न। तर कुनै व्यक्ति कोरोना संक्रमित छ-छैन भन्‍ने परिक्षणका पनि त विधि छन् नि! शंका लागेका त्यस्ता व्यक्तिलाई क्‍वारेन्टिनमा राख्‍न सकिन्छ।
यो कुनै पनि राज्यका लागि असम्भ कार्य होइन। यदि हवाइमार्गबाट फर्किएकालाई सरकार नि:शुल्क क्‍वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सक्छ भने स्थलमार्गवाट फर्किएका निम्ति किन भेदभाव गर्छ? ‘समाजवादउन्मुख’ मुलुकका निम्ति हवाई मार्गवाट र स्थलमार्ग भित्रिनेको मूल्य फरक हुन्छ हो? चीनको वुहानमा कोरोनाको संक्रमण फैलिइरहँदा ढिलै भए पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक पठाएर उद्दार गरिएको कामको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो।